Thenga kumakhemikhali eGenotropin eThailand - iGenotropin GoQuick Pen 12mg
I-Genotropin GoQuick Ipeni ye-12mg (36IU) x 5 Inkambo ephelele
Intengo ejwayelekile I-0.00 ฿ I-67,500.00 ฿ Sale
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-2 Bhala ukubuyekeza
- I-Genotropin GoQuick Ipeni 12mg (36IU)
- Izindwangu ze-BD Ultra Fine Pen
- Isiqukathi sokupholisa kwezokwelapha (i-2-8 degree lokushisa)
Imiyalo yokusetshenziswa (ifayela le-PDF)
Ukusebenza okusebenzayo: Somatropin
CCF: I-hormone yokukhula ephindaphindiwe
Umkhiqizi: PFIZER I-MFG. I-BELGIUM NV (Belgium)
I-hormone yokukhula kwezidakamizwa. Imele ukuhlanganiswa okwenziwa ngamasu okuvuselela okuthiwa i-somatropin, afana ne-hormone yokukhula yabantu. Izingane ezingenayo i-hormone yokukhula engapheliyo, kanti i-Prader-Willi syndrome i-somatropin iyanda futhi ishesha ukukhula komzimba wamasipha. Njengabantu abadala, kanti izingane ze-somatropin zigcina isakhiwo somzimba evamile, zishukumise ukukhula kwemisipha nokugqugquzela ukugqugquzela amafutha. Izwela ngokukhethekile ku-somatropin visceral adipose tissue. Ngaphezu kokuvuselela kwe-lipolysis, i-somatropin yehlisa ukungena kwe-triglycerides kuma-depot amafutha. Ngaphandle kwalokho, izidakamizwa zithinta amafutha, i-carbohydrate kanye nesimetabolism samanzi. I-Somatropin ivuselela ama-receptors e-LDL esibindi, futhi isebenza kuphrofayili ne-lipoprotein iphrofayli ku-serum. Ngokujwayelekile, iziguli ezibhekene ne-somatropin ezinokukhubazeka kwe-hormone ukunciphisa ukuhlushwa kwe-LDL cholesterol kanye ne-apolipoprotein B in serum. Futhi, kungase kube nokuncipha kwe-cholesterol esiphelele. I-Somatropin ikhulisa amazinga e-insulin, Nokho, amazinga e-glucose okuzila ukudla ajwayelekile ashintshiwe. Izingane ezine-hypopituitarism zingase zibe nokuzila ukudla kwe-hypoglycemia, zifake ezigulini ezithola lesi sidakamizwa. I-Somatropin ivuselela umthamo we-plasma kanye nezicubu ezimanzi, iyancishiswa ngokuntuleka kwe-hormone yokukhula; ikhuthaza ukugcinwa kwe-sodium, i-potassium ne-phosphorus. I-Somatropin ivuselela umzimba we-metabolism. Ezigulini ezine-hormone yokuntuleka kokukhula kanye ne-osteoporosis somatropin ukwelashwa isikhathi eside kuholela ekutheni kutholakale ukubunjwa kwamaminerali nokwebiwa kwamathambo. Ukwelashwa kwe-Somatropin kwandisa amandla omzimba nokukhuthazela ngokomzimba. I-Somatropin ibuye ikhulise ukukhishwa kwenhliziyo, kodwa indlela yokwenza lokhu ingakaziwa. Inselelo engase idlale ekunciphiseni ukuphikisana kwamagciwane amancane. Kulezi ziguli ezine-hormone yokuntuleka kokukhula kungase kube ukwehla kwamakhono engqondo kanye nezinguquko esimweni sengqondo. I-Somatropin ikhulisa amandla, Ithuthukisa inkumbulo iphinde ithinte ukulinganisela kwama-neurotransmitters ebuchosheni.
Njengabantu abanempilo, futhi ezigulini ezinokukhubazeka kwe-hormone ukukhula cishe ku-80% n / a kufakwe ku-Genotropin®. Uma i-p / injection umthamo we-0.1 IU / kg isisindo somzimba esingu-Cmax yi-13-35 ng / ml ifinyelelwe ngemuva kwe-3-6 no. I-Vd yi-0.5-2.1 l / kg.
I-Metabolism kanye ne-excretion
I-Biotransformiroetsa izinso nesibindi. Isilinganiso se-T1 / 2 ngemuva kokuthi / ku-Genotropin® ezigulini ezinokuntuleka kwe-hormone ukukhula cishe nge-0.4 no. Uma s / ekusungulweni komuthi we-T1 / 2 ufinyelela ku-2-3 no. Umehluko ophawulayo, mhlawumbe, ohlotshaniswa nokumamatheka okuncane kwesidakamizwa ku-n / umjovo. Mayelana ne-0.1% izidakamizwa ezilawulwayo ifomu elingaguquki lidonswe nge-bile.
Pharmacokinetics ezimweni ezikhethekile zemitholampilo
I-bioavailability ngokuphelele ye-Genotropin® uma ifana nokufana nabesilisa nabesifazane.
Imiphumela emibi, ebangelwa ukulondoloza okuketshezi: umuntu omdala (> 1% no- <10%) - i-edema yedayipha, ama-pastoznost aphansi, i-artralgii, i-myalgia ne-paraesthesia. Lezi zindlela ngokuvamile ziba mncane noma zilinganise, Zenzeka phakathi nezinyanga zokuqala zokwelapha futhi ziyancipha ngokuzenzekelayo noma emva kokunciphisa umthamo. Imvamisa yale miphumela engemihle kwaba Genotropin® umthamo-engaphansi, engu-iziguli, mhlawumbe, inhlukanozigaba kuya ubudala, lapho i esingamahlalakhona hormone ukukhula. Ezinganeni, le nemiphumela emibi ayidlangalaleni (> 0.1% no- <1%). I-CNS: ayitholakali (> 0.01% no- <0.1%) - ingozi ephezulu yengozi, ingase ithuthukise ukuvuvukala kwesibindi se-optic. Esikhathini senqubo ye-endocrine: okungajwayelekile (> 0.01% no- <0.1%) - ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela sehlobo 2. Futhi wembule ukwehla kwe-serum cortisol. Ukubaluleka komtholampilo kwalesi senzakalo kubonakala kunqunyelwe. On the ingxenye uhlelo zemisipha: dislocation kanye subluxation ikhanda femoral, soprovozhdaющiesя prihramыvaniem, ubuhlungu inyonga nedolo; ezigulini ezine-Prader-Willi syndrome zingase zenze i-scoliosis (i-Genotropin® Ikhulisa izinga lokukhula); okungavamile - i-myositis, engabangelwa isenzo se-m-cresol yokulondolozwa, okuyingxenye yeGenotropin®.
Ukusabela kwe-allergic: ukuqhuma isikhumba nokushaya.
ukusabela Wasekhaya: kusayithi umjovo (> 1% futhi <10%) - amawala, ukuluma, soreness, ukuba ndikindiki hyperemia, ukuvuvukala, lipoatrophy.
Okunye: ezimweni ezimbalwa (<0.01%) - Nokho, Ukuthuthukiswa wegazi ezinganeni, tigameko wegazi akuyona sihluke ukuthi izingane ngaphandle ozokusebenzisa ukuntula.
- Izimpawu isimila ukukhula, kuhlanganise ukwanda okungaqondiswa kwamadolobha ingozi intracranial isimila (Ukwelashwa antitumor kumele sigcwaliswe ngaphambi Ukuqalwa ukwelashwa Genotropin®);
- Isimo esibucayi, ukukhula ngokuphuthumayo ezigulini ngenxa yokuhlinzwa kwenhliziyo evulekile noma esiswini, ukuhlukunyezwa okuhlukahlukene kanye nokucindezeleka okunamandla okuphefumula;
- Ukukhuluphala ngokweqile (isilinganiso sesisindo somzimba / ukuphakama kudlula i-200%) noma izifo ezinzima zokuphefumula ezigulini ezine-Prader-Willi syndrome;
- Ukuvala izindawo zokukhula ze-epiphyseal zamathambo ende;
- Hypersensitivity kunoma yikuphi ingxenye yomuthi.
KUSUKA kufanele kubekwe iziguli eziphethwe yisifo sikashukela, isifo somfutho wegazi ophezulu, ukungena kwegazi.
Ukwaziswa okwelashwa noGenotropin® ngesikhathi sokukhulelwa kunqunyelwe. Ngakho-ke, ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kuhlolwe ngokucacile isidingo sokuqokwa kwesidakamizwa kanye nobungozi obungenzeka, okuhambisana nalokhu. Phakathi namazinga avamile okukhulelwa kwe-pituitary growth hormone ngokunciphisa kakhulu ngemuva kwe-20 yesonto, ishintshwe cishe ngokuphelele ngeviki le-30 eliphansi, ngakho-ke isidingo sokuqhubeka nokwelashwa esikhundleni sikaGenotropin® ku-III trimester yokukhulelwa akunakwenzeka. Ucwaningo lwezilwane aluzange luveze noma yimiphi imiphumela emibi emntwaneni, okungafanele kube khona, ukuthi imiphumela efana nayo iyotholakala uma usebenzisa i-Genotropin® yomuntu. Ukwaziswa okuthembekile mayelana nokwanda kwe-hormone yokukhula ebisi lwebele akukho, kodwa kunoma yikuphi, ukutholakala kwamaprotheni angenasisindo kusukela emathunjini emathunjini omzimba akungabazeki neze.
Amacala okudlula ngaphezulu i-Genotropin® engaziwa. Izimpawu: ekudluleleni ngokweqile kwe-hypoglycemia, bese-hyperglycemia. Ukudlula ngokweqile isikhathi eside kungase kwenzeke izimpawu ezibonakalayo ze-hormone yokukhula komuntu ngokweqile (akromegalija, gigantizm). Ukwelashwa: ukususwa kwesidakamizwa, ukwelashwa kwe-simptomaticheskaya.
I-GCS kuhlelo lokusebenza oluhlangene linciphisa umphumela oshukumisayo we-Genotropin® ekukhuleni. Ukusebenzisa ngesikhathi esisodwa ku-Genotropin® ne-thyroxin i-hyperthyroidism elula ingathuthuka.
IMIBUZO YOKUSEBENZA IZIMPILO
Isidakamizwa sikhululwa ngaphansi kwemithi kadokotela.
IMITHETHO NEMIGOMO YOKUGCINA
Isidakamizwa kufanele sigcinwe singene ekufinyeleleni kwezingane, indawo emnyama ekushiseni kwe-2 ° kuya ku-8 ° C. Impilo yesheluli - unyaka we-3. Isixazululo esiphelile singagcinwa esiqandisini (ekushiseni kusuka ku-2 ° kuya ku-8 ° C) phakathi namaviki e-4. Gwema ukukhanda noma i-cartridge, akukho isisombululo esilungile.